Tajaajila istaafiingii daldala alergiif
Geejibni Galaanaafi Lojistiksii Itoophiyaa wiirtuu daldalaa alaafi keessaa biyyatti ta'uun kan tajaajilaa jiruudha. Dhaabbatichi tajaajila buufata meeshaalee alergii fichisiisaa jiran keessaa buufatiifi terminaalli Aqaaqii, Galaaniifi Mojoo isaan ijoodha. Tibba darbee buufataalee kanatti daawwannaa qaamoleen kominikeeshiniifi miidiyaa taasisaniin sochiifi hojii buufataaleen kunneen sharafa biyyattiin alattii baastuufi daldala si'eessuu keessatti gumaachaa jiru hubateera.
Finfinnee, Kutaa Bulchiinsa Aqaaqii Qaallittiitti kan argamu buufanni kun tajaajila kuusaa meeshaalee alarraa ergamaniif kennuu cinaatti, bifa haaraan tajaajila istaafiingii kennuu eegaleera. Istaafiingiin konteenaroota meeshaalee alergiif barbaachisan mijeessuun maammiltootaaf dhiyeessuudha. Tajaajilli kun duraan buufata Jibuuti jirutti kan kennamaa tureefi sharafa alaatiin kan kaffalamee dhimma itti ba'amaa ture ta'uu, Dhaabbata Loojistikiifi Geejiba Galaanaa Itoophiyaatti Hojigeggeessaan Terminaalaafi Buufataa Damee Aqaaqii Obbo Wandee Taaddagee ni dubbatu. Akkasaan jedhanitti, terminaaliin kun tajaajila buufataafi terminaalaa kan eegalee Finfinnee naannawaa Laga Harreerraa gara Aqaaqiitti erga jijjiirameeti. Mankuusaa hektaara 12rra buufateefi meeshaalee buufataafi terminaalaa toonii sadii hanga 45 fe'an kan qabuudha. Buufatichi konteenaroota kuma lama keessumsiisu kan danda'u ta'uus himu.
Baatiiwwan saddeet keessattis meeshaalee galii konteenaroota kuma 13fi 594 kan keessumsiifaman yoo ta'u, konteenaroonni 530 tajaajila istaafiingiin kennamuu eeru. Yeroo ammaas tajaajila alergiitiif kan oolan konteenaroonni gaaffii maamiltootaatiin qopheeffama akka jiran himanii, tajaajila istaafiingii kennuun terminaalaotaafi buufataalee damee biraarra jiranirra buufaticha kan adda taasisu ta'u ibsu. Kanaan dura meeshaaleefi konteenaroonni kan walqunnamsiisfaman buufata jibuutiirratti ta'uu kan eeran Obbo Wandeen, kunis hojmaataa sirrii akka hintaanne amanna jedhu. Sababni isaas, meeshaaleen konteenarootaan dhufan, deebi'anii duwwaa kan gara Jibuutiitti geejibsiifamaniidha. Akksumas meeshaaleen alergii utuu hinsamsamiin sharaadhaan fe'amanii gara jibuutii gejiibamu. Kunimmoo baasii hedduu kan gaafatuufi alergitootaafis mijataa akka hintaaneedha kan dubbatan.
Erga taajaajilli kun buufataa Aqaaqiitti eegalameetii konteenaroonni buufatichaa keessa kan jiran yoo ta'e, tajaajila istaafiingiitiif oolfamu. Kan hinjiraanne yoo ta'e ammoo buufatalee damee jiranirraa fichisiisuun tajaajila istaafingiif oolchuun maamiltootaaf dhiyeessu. Utuu Jibuutiirra ta'ee, tajaajila kanaaf konteenara tokkotti doolaaraa 17tu kaffalamu ta'uu ibsanii, buufata kanatti garuu qarshii 940 qofa kan kaffalchiifamu ta'uu himu.
Akka ibsa Obbo Wandeetti, buufatichi tajaajila kanaan maamiltootaa tajaajiluudhaaf qindoominaan, haala si'ataafi baasi hir'isuun hojjechaa jiraatullee, maamiltoonni hedduun tajaajila kanatti maayii ba'aa akka hinjirani. Alergitoonni hedduun buufaticharratti tajaajila istaafiingiitti dhimma ba'uurratti hanqinni akka jiru eeranii, tajaajila dhiyeenyatti argamu kanaaf, baasii xiqqoon akka gargaaraman waamicha dhiyeessu.
Buufatichi waldaalee gurmaa'anii tajaajila istaafiingiif konteenaroota dhiquufi samsuudhaan maamiltoota dhaabbatichaaf dhiyeessaa jiru. Waldaalee gurmaa'anii hojii kanarratti bobba'an keessaa Walittiqabaa Waldaa Shariikaa Fe'uufi Buusuu Hasan Geetaachoo, Baahiluufi Hiriyootasaa, Obbo Daawit Bagaashaa akka jedhanitti, waldichi gurmaa'uun tajaajila kennu erga eegalee waggaafi ji'a torba keessatti kaffaltii tajaajila qarshii mil.15 argateera. Kana keessaas qarshii miliyoonni 1.3 kaffaltii alergiirraa kan argate ta'uu himu. Baatiiwwan torba keessattis konteenaroota 450 samsuun fe'uu eeranii, yeroo ammaas konteenaroota 40 fe'uudhaaf qophii taasisaa akka jiran dubbatu. Buufata kanatti tajaajilli istaafiingii kan kennamu, maqaan biyyaa akka hinbannetti, maammiltoonnis akka hinmufanneetti of eeggannoofi qulqullinaan kan hojjetaniidha.
Haaluma kanaan namoonni 240 ol gurmaa'uun carraa hojii akka argatan dubbatu. Tajaajila istaafiingii kan kennanis midhaanota akka maashoo, saliixiifi buna ta'uu eeru. Addatti ammoo bunnii wayita samsamu ofeeggannoo olaanaadhaaniidha jedhu.
Akka Obbo Daawwit jedhanitti, hubannoofi tajaajilli kun biyya keessatti madaqfamuu dhabuurran kan ka'eedha malee, hanqinni yoo jiraatellee hojjetaan tajaajila kenne waan beekamuuf haalli ittiin ittigafatamaa taasisan akka jiru hubachuun dand'ameera. Hanga ammaattii maamilli tajaajila kennamerratti komii dhiyeesse akka hinjirre dubbatu. Kanaanis, carraan hojii gama kanaan uumameefiin hedduu fayyadamaa akka ta'anillee dabalanii eeru.
Kaampaanonni manufaakchariingii alergiirratti xiyyeeffatanii biyyattiitti baay'achaa jiraachuun, yeroo ammaa xiyyeeffannaan kan kennameefii jiruu istaafiingii konteenaraati kan jedhan Geggeesaan hojii Damee Tajaajila Shiippingii Dhaabbata Loojistikiifi Geejiba Galaanaa Itoophiyaa Kaapiteen Tafarraa Badhaasaati. Kanaaf, kaampaaniiwwan kanneeniif wayita meeshaalee isaanii alatti ergan tajaajila istaafiingiitiin akka fayyadamaniif hojjetamaa jira. Kunimmoo deggarsaa addaa kan qabu yoo ta'u, kampaanii alergiirratti bobba'eef konteenara baasii zeeroodhaan dhiyaataafi. Yeroo yeroodhaanis akkaatuma baay'ina meeshaalee biyyattiitiin ofhaaromsaafi dandeettiin barbaachisu ijaaramaa akka jiru dubbatu.
Walumagalatti, tajaajilaa damee kanaan kennaman keessaa istaafiingiin reefu madaqfamaa jira. Maamiltoonni hedduunsaanii tajaajila kanatti dhimmaa ba'aa akka hinjirre hubachuun danda'a,eera. Tajaajilli kun ammoo giddugaleessa biyyattiitti eegaluun, baasii maamiltoonni baasan kan hambisuudha. Kanaaf tajaajila kanatti maayii ba'uudhaan baasii hir'isuun, guddina dinagdee waliigalaaf gumaacha kan taasisuudha.
Torban kana/This_Week 44010
Guyyaa mara/All_Days 1635805